Dowladda Soomaaliya oo ciidamo u direysa gobolka Mudug - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo u direysa gobolka Mudug
December 8, 2019 (Awdinle Online) –Dowladda S Federaalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed ka soo saartay colaad u dhaxaysa beelaha ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
War-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in dhawaan guddi ka qeyb qaata daminta iyo xalgaarista colaadaas loo diri doono deegaanada Towfiiq iyo Af-Barwaaqo oo ka tirsan gobolka Mudug, halkaas oo maleeshiyo beeleed maalin ka hor ku dagaalamay ay is kaga dileen in ka badan 15 iyo dhaawac intaas ka sii badan.
Sidoo kale warkaan ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in ciidamada isku dhafka ah ee ka howlgala qeybo ka mid ah gobolka Mudug lagu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan u gaaraan deegaanada lagu dagaalamayo.
Previous articleMaxa ka jira in DFS ay mamul cusub u samaynayso deeganada Sanaag, Sool iyo Cayn.
Next articleDaawo:- Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir “waxaan iska cafiyey culimadii igu xadgudubtay”